Ungayitshintsha njani imodem kwi-Samsung Galaxy S | I-Androidsis
Ngokwesicelo sabanye abasebenzisi be I-AndroidsisNdiza kuchaza Ungayitshintsha njani imodem kwii-roms esekwe kwi-Android Ice Creram Sandwich.
Esona sizathu sokutshintsha iimodem yile Unxibelelwano olubi lweSamsung Galaxy S yethuKuba imodem yesixhobo sethu inoxanduva lokulawula lonke unxibelelwano kunye nenkqubo yonxibelelwano, ilawula inethiwekhi yedatha, i wifikunye ibluetooth.
Ngamanye amaxesha sidibana I-roms eguqulweyo yesiphelo sethu, Esebenza kakuhle, kodwa ngelishwa, ukhetho lokuba pheka ufake njenge modem Ngokuzenzekelayo ayisebenzi kwaphela kuthi.
Ke, ngaphandle kokukufundisa Ungayitshintsha njani ngokufanelekileyo imodem ye-Samsung Galaxy S yethuNdiza kukubonelela ngeemodem ezintathu ezilungiselelwe ukuba zikhanyiswe ukusuka ekubuyiseni, ezimbini zazo zithathwe ngqo kwi Samsung Galaxy Nexus, kunye neyokugqibela kubo, imodem IJVU yoqobo zesitokhwe see roms ze Samsung, Yeyona inika ezona ziphumo zibalaseleyo kubasebenzisi.
Ungayitshintsha njani imodem
Into yokuqala ekufuneka siyenzile khuphela i-zip eneerediyo ezintathu ezichazwe apha ngasentlaNje ukuba ifayili ikhutshelwe, siya kuyivula kwifayile ye- desktop yePC yethu kwaye siya kukopa kwifayile ye- Ingcambu ye-sdcard yeGlasi yethu, i Iifayile ezintathu ze-zip ngaphakathi, Nje ukuba yenziwe, singayicima ifayile ye- Samsung Galaxy S kwaye uqalise kwakhona ngaphakathi imo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, Ukusuka apho siza kutshintsha khona imodem.
Nje ukuba uqalise kwakhona kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, siya kulandela le miyalelo ilandelayo:
Okuphambili / Sula i-dalvik cache
Sizulazula kwi-zip yerediyo esinomdla wokuyifaka kunye nokuqinisekisa ukufakwa kwayo.
Ngale nto siza kuba nemodem yethu entsha efakiweyo, ndincoma ukuba uzame i Imodem yeKF1Oko kukuthi, kumava am, eyona inentsebenzo kunye nokusetyenziswa kwebhetri.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Samsung Galaxy S, iRom Dark Knight 5.5
Khuphela - Iifowuni ze-Samsung ICS
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung Galaxy S, ungayitshintsha njani imodem kwii-roms esekwe kwi-ICS
Enkosi ngegalelo, kodwa kufanele ukuba kucaciswe ukuba kukho iimodem ezingenayo ibhendi ye-850MHZ kwaye iyasetyenziswa kwabanye abaqhubi nakwamanye amazwe.
Zonke iimodem ezibonelelweyo zisebenza kubo bonke abaqhubi kwihlabathi liphela.
Molo, enkosi ngeposi, kodwa ndinengxaki efanayo naleyo uyicacisayo, umahluko wokuba iselfowuni yam yinyundo ye-UMi, ineKit 4.4.4, ishiywe iswelekile ngenxa yengozi ebendinayo Ndiyidanyazisile kwaye ndakwazi ukuyifumana kwakhona, kodwa ngoku andiyifumani i-Ime kwaye ayisebenzi, ngeapps ndafaka i-imeyisi yoqobo kodwa ndilahlekelwe ngumqondiso amaxesha amaninzi, ungandinceda ngoonomathotholo okanye imodem, mna Ndingayivuyela ngonaphakade, enkosi
URaul Alfredo Neira Novoa sitsho
Sebenzisa i-JVU esebenza ngokugqibeleleyo kwibhendi ye-850Mhz.Imibuliso ivavanywe eDigitel eVenezuela, iphakamisa uH ugqibelele.
Phendula kuRaul Alfredo Neira Novoa
Umbuzo omnye: Kuthekani ukuba amanyathelo amabini okuqala awenziwanga?
Kwaye ukuba bekufuneka zenziwe, uyazi ukuba yintoni eyenziwayo nganye nganye (susa isahlulelo se-cache kunye ne-Advance / Sula i-dalvik cache)?
Ukusula kwenzelwa ukuphelisa intsalela yeenkqubo zangaphambili okanye iirom, nkqu nedatha yomsebenzisi, ke ngale ndlela uyaqinisekisa ukuba ufaka i-rom ecocekileyo, ngaphandle kwentsalela yezinye izibane ezinokudala ukungavisisani kunye nokuvalwa ngokunyanzelwa kwezicelo.
Ndiyifumana kuphela kwaye ngolu hlobo:
Faka uvuselele esuka kwikhadi lesd
Sula idatha / ukusetha kabusha ifektri
Ngalo lonke ixesha ndizama ukufaka enye, indixelela ukuba "ukufakelwa kukhutshiwe" kunye nempazamo kwidilesi ye-zip (inqanaba 7) andazi ukuba yintoni leyo? ndenze ntoni?
Corduroy uyisombulule ingxaki
Inguqulelo yeJVU isebenza ngokuGqwesileyo kwiDigitel Venezuela. I-Kf1 ayiphakamisi i-H kwi-Digitel enye andikayizami, ndiyabulisa, ndiyathemba ukuba izimvo ziya kunceda 😉
Ilcapo Co. sitsho
Ndinengxaki encinci ngalo mbandela ... kuyabonakala ukuba kufuneka nditshintshe imodem ukusukela xa nditshintsha ukusuka kwirom ukuya kwezokugqibela ayiyiboni i-imei okanye i-sim kwaye ayiniki gubungela ... kodwa xa ndicofa ikhonkco lokukhuphela iiradiyo i-samsung ics kwi-4shared akukho fayile enjalo .... ngaba umntu angandinika intambo ???
Phendula u-Ilcapo Co
AKUKHO SIGANEKO XA KUKHUNJZIWE …… UXOLO !!!
Andazi ukuba kutheni okanye kutheni kodwa iphepha lingavulekanga kakuhle kwaye yiyo loo nto ndingakhange ndikwazi ... ngoku ndifumene lo mbandela ... ... ... ... tshintsha i-rom nayo yonke into ime ngendlela kwaye izinzile
Molweni nonke, yeyiphi imodem eniyicebisayo nge-g9000 s yeXNUMXT pais panama ????
Ezi modem zikwasebenzela i9001 (S Plus) ngecyanogenmod rom ???
Ewe, andazi, zama usixelele
Ngaba ezi modem zinokusetyenziswa kwi-android4.1.2?
Nge-05/11/2012 ngo-00: 48, «Disqus» wabhala:
Ndine-galaxy ekhutshiweyo kodwa ayithathi i-3g okanye i-H kuphela kwi-EDGED, Kwezinye iiforamu ndibone ukuba bathi ndibeka imodem yaseYurophu kuyo, ngaba ziya kusebenza?
Ndicinga ukuba xa uzama ukubona ukuba kunjani kwaye usixelele
Nge-05/11/2012 ngo-00: 56, «Disqus» wabhala:
ndingazifumana phi iifayile zesonka sejinja?
Ngaba ezi modem zixabisa isonka sejinja?
Hayi, kuphela kwiCyanogenmod 9 kunye ne-10
Kulungile, enkosi ngokuphendula. Ngaba uyazi apho ndingafumana khona iimodem zesonka sejinja?
Ndicinga ukuba ndiyakhumbula ukuba kwi-Odin mobile App kukho ukufikelela kukernel kunye nokukhuphela imodem kodwa ungandihoyi kakhulu.
Jonga le app kwaye undixelele ukuba iyakusebenzela :.
UAlberto Fernandez Fuentes sitsho
Uff, ugqibelele kakhulu, zininzi, kuya kufuneka sithathe ixesha ukuzama, enkosi ndoda, uqhekezile
Phendula u-Alberto Fernandez Fuentes
UAlfonso Olivares sitsho
Abahlobo aba abayi kusebenza kwi-movilnet venezuela nge-gingerbread 2.3.5
Phendula kuAlfonso Olivares
Ungathini ngoFrancisco, enkosi kakhulu ngabo bonke abahlobo bam, umbuzo omncinci kwaye undixolele ukuba sele uphenduliwe, andiyifumenanga, ndingayisebenzisa i-KF1 okanye enye imodem ye-CF-Root-XX_OXA_JVU_2.3.6- v4.3-CWM3RFS?
UKUHLELA: kuphela "ukuphakamisa" i-R, kungenjalo ilungile
Yizame, ndicinga ukuba izakusebenzela, nangona kunokwenzeka ukuba iimpukane zilungiselele ukhuphelo, nandroid backup ekubuyiseni.